Magaca + Qabiilka Uu Kasoo Jeedo Naftii Haligihii isku Qarxiyay Afgooye Todobaadkan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Magaca + Qabiilka Uu Kasoo Jeedo Naftii Haligihii isku Qarxiyay Afgooye...
Magaca + Qabiilka Uu Kasoo Jeedo Naftii Haligihii isku Qarxiyay Afgooye Todobaadkan
Barqanimadii hore ee maalintii Jimcaha oo taariikhdu ku beegneyd 2- March, ayuu mid kamida natiis haligayaasha Al Shabaab oo hogaaminayey gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ku beegsaday saldhig melleteri oo dowladda Imaaraatka carabta ay ka dhistay duleedka Muqdisho.
Weerarkan oo dhacay waxyar ka hor inta aanan la gaarin salaadda jimcaha ayaa lagu beegsaday ciidanka u daacadda ah Imaaraatka Carabta kuwaas oo saldhig iyo fariisimo ku leh degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Howlgalkan waxaa fuliyey sida warbaahinta Shabaab afkooda ku hadasha ay baahisay Aadan Cali Ukumey oo sidoo kale loo yaqaano (Qalinle iyo Baariyow) kana dhashay Beesha Hubeyr gaar ahaan reer Wanjele.
Da’ ahaan waxaa lagu sheegay in uu ahaa 26 jir ah oo ku dhashay degmada Qansaxdheere ee gobolka Baay, ninka is qarxiyay ayaa la hadlay warbaahinta Andalus ee afka kooxdaas ku hadasha wuxuuna muujiyay sida uu ugu qanacsan yahay fulinta weerarkaas.
Kooxda Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas qasaaraha geystay ee ka dhacay dhammaadkii todobaadkii lasoo dhaafay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Koonfurta Soomaaliya.